SIDA GUSKA LOO ADKEEYO AMA SIDA GUSKA LOO WEYNEEYO - iftineducation.com
SIDA GUSKA LOO ADKEEYO AMA SIDA GUSKA LOO WEYNEEYO
iftineducation.com – Daawo 10 Ka Geed Ee Awooda Galmada Kordhiya Oo Aysan Cuntadu Ku Jirin…Video Waxa jiro geedo badan oo ka baxa dhulka somalida kuwaasi oo somalida intooda badani adeegsadaan balse dhalinyartu ay ka dhaga laadahay arrinkaasi
7. Soo qaado shamaca Malabka (25g), Miski (5g), Cambarka Nibiriga oo dabiici ah (10g), Saliid Xabaasuud (240) iyo Sonkor (5g). Intaad isku wada qastid ku karkari
dab deggan illaa iyo intay si wanaagsan isu dhex dabaalanayaan, midabkooduna ka noqonayo madow xigeen, dareerihiina isu beddelayo cajiin xigeen. Dabeeto intaad quraarad yar ku shubatid, dhig meel aanay carruurtu ka gaadhi karin. Galab iyo subax ka qaado qaddar aad u yar oo le’eg madaxa kabriidka kuna cab shaah, saddex beri kadibna ii war keen.
DAAWO VIDEO: “Naag kacsatay naagtaan lee iga dheh waa naag aan kacsigeeda yareyn”
SInday gabdhuhu ukacsadaan